Ukumaka Material - MimoWork
ISICELO SOKUBUKA KAKHULU
Ukuze kube lula ukumaka ezintweni zokwakha, i-MimoWork inikeza izinketho ezimbili ze-laser zomshini wakho wokusika i-laser.Usebenzisa amapeni omaka nezinketho ze-inkjet, ungamaka izingcezu zokusebenza ukuze wenze kube lula ukusika kwe-laser nokukhiqizwa kokuqopha.Ikakhulukazi endabeni yokuthunga amamaki emkhakheni wokukhiqiza izindwangu.
Izinto ezifanele:I-polyester, Polypropylenes, TPU,I-Acrylicfuthi cishe bonkeIzindwangu Zokwenziwa
I-R&D yezingcezu eziningi ezisikiwe nge-laser, ikakhulukazi zezindwangu.Ungasebenzisa ipeni lomaka ukwenza amamaki ezincekwini zokusika, okwenza abasebenzi bakwazi ukuthunga kalula.Ungayisebenzisa futhi ukwenza amamaki akhethekile njengenombolo yesiriyali yomkhiqizo, usayizi womkhiqizo, usuku lokwenziwa komkhiqizo nokunye.
Izici Namaphuzu Avelele
• Imibala ehlukene ingasetshenziswa
• Izinga eliphezulu lokunemba kokumaka
• Kulula ukushintsha ipeni lokumaka
• I-Mark Pen ingatholakala kalula
• Izindleko eziphansi
Imojuli ephrintiwe ye-ink-jet
Isetshenziswa kabanzi kwezentengiso ukumaka kanye nokubhala ngekhodi imikhiqizo namaphakheji.Iphampu enengcindezi ephezulu iqondisa uyinki owuketshezi kusuka endaweni yokugcina amanzi ngomzimba wesibhamu kanye nombhobho omncane kakhulu, idale ukugeleza okuqhubekayo kwamaconsi kayinki nge-Plateau-Rayleigh.
Uma kuqhathaniswa 'nepeni lomaka', ubuchwepheshe bokuphrinta be-ink-jet iyinqubo engathinteki, ngakho-ke bungasetshenziswa ezinhlotsheni eziningi ezahlukene zezinto.Futhi kukhona oyinki abahlukene benketho efana noyinki oguquguqukayo kanye noyinki ongaguquguquki, ukuze ukwazi ukuwusebenzisa ezimbonini ezahlukene.
• Akukho ukuhlanekezela ngenxa yokumaka ngaphandle kokuxhumana
• Uyinki owomisa ngokushesha, awucimeki
• Oyinki/imibala ehlukene ingasetshenziswa
• Ngokushesha kunokusebenzisa ipeni lokumaka
Khetha inketho efanelekile yokumaka noma ilebula izinto zakho!
MimoWorkuzibophezele ekutholeni izimo zangempela zokukhiqiza kanye nokuthuthukisa izixazululo ze-laser ezichwepheshile ukuze zikusize.Kunezinhlelo zemishini ye-laser nezinketho ze-laser ongakhetha kuzo ngokuya ngezidingo ezithile.Ungahlola lezi noma ngokuqondilesibuzeukuze uthole iseluleko laser!
>>Ukubuka konke komshini we-Laser
>>Iqoqo Lezinto Zokusebenza
Ungakhetha kanjani ipeni lomaka kanye nejethi kayinki yesisiki sakho se-laser
Khuluma Nomeluleki Wethu We-Laser Manje!
©Copyright - 2010-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe. , , , , , , ,